့ သားရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် အဖြစ် လှူပါရစေ အမေ (ချစ်တဲ့သား- Yမြစ်ချို)
ဖိုင် လိုချင်ရင် download ကဒီမှာလုပ်ပါ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, June 19, 20100comments
လာရောက်လည်ပါတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နေ့ စဉ်သတင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဖတ်နိုင်တာမို့ကျွန်တော့အနေနဲ့သိမ်းဆည်းသင့်တဲ့အရာတွေဦးစားပေး သိမ်းတာလောက်ကလွဲရင် ကျွန်တော်က ဘလော့ခ်ကာ တယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် အာဇာနည် ဘလော့ခ်မှာ နေ့ စဉ်ကူညီနေတာမို့ဒီကိုလည်း မရောက်ဖြစ်ပါဘူး။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, May 15, 20100comments
Mother Aung San Suu Kyi
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, April 17, 20100comments
My Mother အမေ
Elisa Cordovana paniting
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Thursday, April 15, 20100comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Monday, April 12, 20100comments
ကျွန်တော် တချိန်ကတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူကို ကာကွယ်ခဲ့ တဲ့ တပ်မတော်သားတဦးပါ
"This is our home"; Standing for freedom in Burma from Front Films on Vimeo.
မမေ့ နိုင်တဲ့ဒီပဲယင်း သမိုင်း
Mujahbarrukah. - Up-to-the minute news videos.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, April 03, 20100comments
Uploaded by CinquiemeEtageProduction. - News videos from around the world.
2010 မှာ ဒီစစ်သူတောင်းစားတွေ ဆင်းမယ်များထင်သလား ..သောက်တရုတ်နဲ့ခြေချင်းခုတ်နေကြပေါ့
ဒုတိယအကြီးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းလည်း တရုတ်တာဝန်ယူ
Friday, 26 February 2010 18:08 ရန်ပိုင်
စစ်အစိုးရက ရှမ်းပြည်နယ် သံလွင်မြစ် အထက်ပိုင်း ကွမ်းလုံဒေသတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဒုတိယအကြီးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း တခု တည်ဆောက်ရန် သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ စာချုပ်ကို စစ်အစိုးရ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ Hanergy Holding Group Ltd နှင့် Goldwater Resources Ltd တို့ နေပြည်တော်တွင် ချုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင်ပါရှိသည်။
ယခုစီမံကိန်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၂၄၀၀ ကီလိုဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအတွက် သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည် ဆောက်မည့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
ပထမစီမံကိန်းမှာ တာဆန်းရေကာတာစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ် ထားသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၇၁၀၀ ကီလိုဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု သိရသည်။
အထက်သံလွင် (ကွမ်းလုံ)စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်မျှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ်မည်ဟု ဖော်ပြမထားပေ။
အထက်သံလွင်(ကွမ်းလုံ)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့်နေရာသည် သိန္နီ နယ်နှင့် ကိုးကန့်ဒေသ ချင်းရွှေ ဟော်မြို့နားတွင်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ခြင်းသည် နယ်ခြားစောင့် တပ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေးအတွက် စစ်အစိုးရ ကိုယ်စား လှယ် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး အကြီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့် ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်(UWSA) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပေါက်ယူချန်းတို့ တန့်ယန်း မြို့တွင် ဆွေးနွေးနေသည့်အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာတိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအပေါ်တွင် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ဖိအားပေးလိုက်ခြင်းဖြစ် သည်ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းစဉ်မှ အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်ကပြောသည်။
“အခုလို ဆွေးနွေးနေချိန်မှာ တရုတ်နဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ကို သတင်းစာမှာ အကြီးအကျယ်ဖော်ပြတာဟာ တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်တွေအပေါ်မှာ ဖိအားပေးလိုက်တာတခုပဲ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် အဆိုပါစီမံကိန်း ပြုလုပ်ရန်အတွက် သဘောတူညီချက်ရရှိထားသည်မှာ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ပြုလုပ်ခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိအားပေးရန် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရင်းနှီးမှုကို ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစိန်ကြည်ကဆိုသည်။
စစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် UWSA ဥက္ကဋ္ဌတို့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တရုတ်စစ်ဖက်အရာရှိ ၃ဦးပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မကြာသေးမီရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ၀ပြည်နယ်နှင့် မိုင်းလားဒေသတို့ရှိ နမ့်ခါမြစ်နှင့် နမ့်လွေမြစ်တို့တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ယူနန်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း နှင့် ပြည်နယ်ဖွံဖြိုးရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း(SDIC) တို့ စစ်အစိုးရနှင့် သဘောတူညီချက်ရရှိထားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဆိုဟု အင်တာနက် သတင်း စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, February 27, 20100comments
တပြည်လုံးမှိုင်းတိုက်ခံ ဘ၀မှ လွတ်အောင် (သို့) MIDEA ဖြင့် အဆိပ်လူးမြှားအဖြစ် ပစ်သောနည်းလမ်း.
တော်လှန်ရေး အပြောင်းအလဲ တခုခုအား..ချဉ်းကပ်ပူးသပ်ကြမယ်ဆိုရင်.
အခုလက်ရှိချိန်မှာ ကျောင်းသား၊ပြည်သူ၊သံဃာအားလုးံပါနေပါပြီ။တပ်မတော်သားတွေဘဲကျန်ပါတော့တယ်။ ဆိုတော့ တပ်မတော်သားတွေကို ဘယ်လိုစည်းရုးံမလဲဆိုတာကို အလေးအနက်ထားစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် လက်ထဲကိုတုပ်ထဲ့ပြီးရိုက်ခိုင်းတာထက်သူ့ ဟာသူတုပ်ရှာပြီး ရိုက်တတ်လာအောင် လုပ်ပေးသင့် ပါတယ်။
အာဇာနည်ကုန်းကိုမြောက်ကိုရီးယားတွေဗုးံခွဲပြီးပြည်သူလူထုကို မတောင်းပန်ဘဲစစ်အစိုးရက သူ့သဘောနဲ့ သူပြန်ဆက်ဆံနေတာကို အာဇာနည်ကုန်းဗုးံပေါက်ပြီးကာစ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအထောက်ထားတွေ၊ ဖမ်းမိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားတစ်ယောက် အကြောင်း၊ ရွှေမန်းခရီးစဉ် ဓါတ်ပုံများ နဲ့တင်ပြခြင်းများ။
Labels: ဖတ်ရန် ဆောင်းပါး, ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံ
ကျွန်တော် ဗမာအစစ်ပါ တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့သူ့ တို့ ကိုယ်ပိုင် နယ်မြေတွေအကြောင်းစဉ်းစားဖြစ်ရင်းနဲ့ဗမာပြည်မြေပုံ ကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ လုပ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ။ သဘောကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လွတ်လပ်ရေးရပြီးရင် ကတိအတိုင်း ပေးရမယ့်လွတ်လပ်ရေးနယ်မြေတွေပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အနေနဲ့ဗမာနဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်လုံး ညီညွတ်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရမယ်ဆိုတာ သိခဲ့လို့ ပါဘဲ ။ တကယ်တမ်း တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်ပေါင်းစုံနဲ့ တိုက်ခိုက် အောင်မြင်ပြီး ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ ပေမယ့် အာဏာရှင်နေ၀င်းရဲ့ စစ်တပ်အာဏာမက်မောမှုကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကတိ ဟာ ပျက်ပြားခဲ့ရပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ကာ ဗမာပြည် အစိုးရကိုတိုင်းရင်းသားတွေ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်တာ မဆန်းပါဘူး ကလေးစကားနဲ့ ပြောရရင် မင်း ကတိမတည်တဲ့ ကောင် ငါသတ်မယ် ပေါ့။ တကယ်လို့ ဗမာပြည် တကယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီး သစ္စာရှိစွာနဲ့ ပြည်နယ်တွေ ပေးခဲ့ မယ်ဆိုရင် ဤပုံအတိုင်းဗမာပြည်ဟာ ယ္ခုလိုတွေ့ မြင်ရမှာပါ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, February 24, 20100comments
ဓမ္မံ သရဏံ (ဂမ်းစာမိ)
သံဃံသရဏံ အကုန် အကုန်(ဂမ်းစာမိ) ပါ ဖြား...........
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, February 21, 20100comments
If you can keep your heard when all about you,
If you can wait and be tired by waiting,
If you meet with triumph and Dister,
And tread those two imposters just the same;
IF you can bear to hear the truth you’ve spoker
Twisted by knaves to make atrap for fools,
And stoop and build’em up with won-out tools:
And risk it on turn of pitch-and-toss.
And lose? And start again at your beginnings,
And never breatheaward about your loss:
With sixth seconds’ worth of distance run.
And-which is more – you’ll beaman, my son !
RUDWARD KIPLING (1865-1936) -
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, February 17, 20100comments
့ သားရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် အဖြစ် လှူပါရစေ အမေ (ချစ်...
ကျွန်တော် တချိန်ကတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူကို ကာကွယ်ခဲ့ ...